Ku guuleystaha Triple Crown Xaqiiji baarista daawada ee guuldaraystay ka hor intaadan guuleysan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Ku guuleystaha Triple Crown Xaqiiji baarista daawada ee guuldaraystay ka hor intaadan ku guuleysan - BGR
Sannadkii hore, faras la yiraahdo Justify wuxuu noqday nin caan ka ah isboortiga isagoo sameyey caanka ah Triple Crown, isagoo ku guuleystay Kentucky Derby, Preakness Stakes iyo Belmont Stakes si uu u sii wado rikoor aan la saadaalin karin. Maanta, in kabadan hal sano ka dib markii la gaadhay kaalinta ugu sarreysa ee tartanka faraska, ayaa su’aalo la weydiiyay sharcinimada guushii cadaaladda ee Justify.
Warbixin ka socota The New York Times waxay shaaca ka qaaday in Caddaaladdu ay ku guuldareysatay. tijaabinta daroogada ka hor intaadan ku guuleysan Triple Crown. Xaqiiqdii, Justify waa in laga reebay tartanka xitaa ka hor inta ugu horreysa saddexda jinsi ee waaweyn, Kentucky Derby.
Sida warbixinta lagu sheegay, Dhibaatooyinka Justify waxay bilaabatay ka dib markii qaylkii uu garaacay asxaabtiisii ​​Santa Anita Derby. Tijaabooyinku waxay muujiyeen in faraska uu ka kooban yahay 'Scopolamine' - oo ah mamnuuc waxqabadka kor u qaadida walax - nidaamkiisa, iyo qaddar aad u xad dhaaf ah heerkaas.
Taasi waxay ahayd inay ku filnaato saraakiishii si ay meesha uga saartaan Caddaaladda tartamada kale, waana hubaal. waxaa loo dammaanad qaaday in laga mamnuuco faraska yar inuu ka qeybgalo kulanka soo socda ee Kentucky Derby. Taabadalkeed, sharciyeye California ayaa dib u dhigay kiiska usbuucyo, iyo ka dib markii uu Caddaalad ku guuleysto Triple Crown, waxa uu meesha ka saaray wax kasta, isagoo ku hoos jiraya sagxadda iyada oo aan xitaa wax tilmaan ah laga helin shacabka.
Tijaabad wanaagsan oo loo yaqaan 'Scopolamine' waxaa sababi kara sababaha dabiiciga ah, sida faraska oo cunaya dhir la yiraahdo Jimson Weed, laakiin qadar aad u badan oo daroogada ku jirta nidaamka cadaaladdu waxay soo jeedisay inay ahayd mid si ula kac ah loo isticmaalo. si kor loogu qaado waxqabadka.
Hase yeeshe, kulan kamarado ah oo ka socda Guddiga Dameerka Fudud ee Kaalifoorniya ayaa go'aansaday in la xiro kiiska oo si gaar ah loogu aaso. Warbixinta oo dhammaystiran ayaa faahfaahinaysa cilaaqaadka u dhexeeya milkiilayaasha, tababarayaasha, iyo guddiga maamulka isboortiga, waana mudan tahay in la aqriyo.
Imika markii macluumaadkan la faafiyay dadwaynaha, waxay noqon doontaa wax aad u xiiso badan in la arko talaabooyinka, haddii ay jiraan, oo laga qaadayo milkiilaha hadda ee Caddaaladda. Dhanka kale, Astaanta cajiibka ah ee xayawaanka ayaa loo baahan karaa in lagu daro astaan.
Isha Sawirka: Steve Cargill / racingfotos.com / Shutterstock
NASA waxay jabisay muuqaal cusub oo Saturn ah, waana hanti dhab ah - BGR